विश्वप्रकाशको आगामी यात्रा « Loktantrapost
विश्वप्रकाशको आगामी यात्रा
२७ पुष २०७४, बिहीबार २१:४२
दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा झापा क्षेत्र न. १ बाट चुनाव लडेका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले आफू करिब ७०० मतले एमाले उम्मेद्वार रबिन कोइरालासँग पराजित भएपछि बिजयी उम्मेद्बार रविन कोइरालालाई टेलिफोन गरी बोलाएर उनीलाई अङ्कमाल गरी अविर पहिर्याई दिएर बिजयीको शुभकामना दिदै भन्नु भयो–‘कमरेड अब तपाईं हाम्रो पनि सांसद । यस क्षेत्रको विकास गराउने जिम्मा अब तपाइँको काधमा आयो । हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र मैले तपाईलाई के सहयोग गर्नु पर्छ हामी र म सहयोग गर्न तयार छौँ ।’
नेपाली राजनीतिमा बिजयी र उपबिजेता बिचको हार्दिकताको राजनीति त्यो भन्दा पहिला कमै भएको थियो होला । उनले देखाएको हार्दिकता त्यतिबेला त चर्चित थियो नै त्यो संंस्कारले नेपाली जनमानसमा एउटा दर्बिलो छाप छोडेको छ । हरेक क्षेत्रमा अहिले पराजित उम्मेद्बारले पराजय स्विकार्दै बिजयी उम्मेद्बारलाई शुभकामना दिने चलन नै चलेको छ ।
चुनावमा उपविजेता बनेपछि उनीले आफ्नो उपस्थितिलाई गाउँमा देखाउन छोडेनन् । जनसेवाका काममा होस् या विकास निर्माणका काममा होस् उनको जनताप्रतिको जवाफदेहिताले जनता माझमा लोकप्रिय बनायो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुगेर हार्दिकताको संस्कार बाँडेका उनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा झापा क्षेत्र नं. १ बाट पार्टीबाट उनको नाम एकल रुपमा सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भयो । यो उनको राजनीतिक सफलता थियो ।
तर चुनावको मुखैमा आएर भएको पहिलो र तेस्रो कम्युनिष्ट पार्टी बिचको एकीकरणले उनको विजयको सुनिश्चिततालाई पछाडि धकेलिदियो । अन्ततः उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेद्वारसँग करिव दुई हजार नौ सयको मतान्तरले फेरि उपविजेता बने । दोस्रो पटकको पराजयसँग धेरै राजनीतिक पण्डितहरुले अब उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको भन्न पछि परेनन् । तर यसपटक पनि उपविजेता भएपछि उनले विजयी उमेद्वार राम कार्कीलाई आफ्नै हातले माला उनेर लगाई दिए र विजयको बधाइ दिदै सेल्फी खिचेर आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरे । जुन राजनीतिक संस्कारको देश विदेशसम्म चर्चा परिचर्चा भयो ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेका कमी कमजोरी र चुनावको मुखैमा भएको वाम गठबन्धनको सहज अवतरणले नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै चल्तिका नेताहरुलाई पराजयको स्वाद चखाइदियो । त्यही घानमा उनी पनि परे । समानुपातिक तर्फको पनि मत परिणाम हेर्ने हो भने जनताले देश र प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कुर्वानीलाई नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । यति मात्र हो कि अव जनता सही र गलत छुट्याउन सक्ने भएका छन् । माओवादीसँगको मिलेमतोमा सरकार बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साना ठूला मुद्दामा गरेको अनावश्यक हस्तक्षेपको पुरस्कार दिएका हुन् जनताले ।
जनता अव हिंसा, किचलो, अस्थिरता, स्वेछाचारिता होइन शान्ति, सहजता, स्थिरता एवम् सुशासन चाहन्छन् । देउवा सरकारले यी कुराहरु दिन सकेन, त्यसको पुरस्कार दिए जनताले । जनताले नेतृत्वलाई पाठ पढाइ दिएपछि काङ्ग्रेसका नेताहरु अपजसको भारी शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा बोकाइ दिएर पन्छिन र नेतृत्व परिवर्तनको नारा उराली रहँदा केन्द्रिय सदस्य विश्व प्रकाश शर्मा भने काङ्ग्रेस अहिले अस्पतालमा पुगेको र अव राम्रो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेस पराजयको अपजस सभापति देउवाले मात्र होइन सिङ्गो पाटी नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्दै काङ्ग्रेस पुनर्जागरणको अभियान लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मको अभियान लिएर निस्किए ।
असहज परिस्थितिमा दिएको साथ र नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने अन्य नेताको दवावलाई मत्थर पार्न सभापति देउवाले केन्द्रिय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको प्रवक्तामा नियुक्त गरेका छन् । जुन विश्व प्रकाशका लागि चुनौती एवम् अवसर दुवै रहेको छ । विश्व प्रकाश शर्मा काङ्ग्रेसका समर्थकले मात्र होइन आम जनताले आशा गरेका नेता हुन् । यही मेसोमा उनीले पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गरेका छन् । यदि उनले यो जिम्मेवारीलाई सहजताका साथ पुरा गर्न सके र पार्टी र जनताका लागि आशाको सञ्चार गराउन सके भने राजनीतिक वृत्तमा आगामी दिन उनका लागि थप सहज हुँदै जाने छ ।
यदि आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहज रुपमा पुरा गर्न सकेनन् भने आगामी दिन उनको राजनीतिक यात्राका लागि थप कठिन हुनेछ । किनभने अहिलेसम्म उनी कार्यकर्ताका मात्र नेता हुन सकेका छन् । जनताको नेता हुन पार्टीले दिएको दुई दुई पटकको अवसरलाई उनले न्याय गर्न सकेनन् । अर्थात जनताको नेता हुने दुई–दुई पटकको अवसर उनले खेर फालेका छन् । त्यसैले उनले अहिले पाएको अवसरलाई शतप्रतिसत सदुपयोग गरेर आगामी पाँच वर्ष पछि हुने चुनावमा जितलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने वातावरण उनले श्रृजना गर्नु जरुरी छ ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा चर्कोसँग उठिरहेको बेला सभापतिले युवा पुस्तालाई दिएको जिम्मेवारीले काङ्ग्रेसमा परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ । यसले आगामी दिनमा काङ्ग्रेस पुनर्जागरणका लागि सहयोग गर्नेछ भने विश्वप्रकाश शर्माको असल राजनीतिक संस्कारका साथ देश र जनताको सेवा गर्ने चाहनामा थप वल मिल्ने छ । तर विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको यो जिम्मेवारी शेरबहादुरको देखाउने दाँत मात्र रह्यो र पार्टीमा उनको रवैया कायम रह्यो भने त्यसले काङ्ग्रेसको र विश्वप्रकाश दुवैको राजनीति धरापमा पर्नेछ ।
काङ्ग्रेसका लागि आएको सङ्कट यो पहिलो होइन, २०१५ साल, २०३६ साल, ५१ साल, ६४ साल र ७४ साल गरी पटक पटक काङ्ग्रेस सङ्कटमा परेको छ । तर पनि काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र प्रतिको दृष्टिकोण र अडान लागि जनताले पटक पटक अनुमोदन गरेका छन् । यदि काङ्ग्रेसले फेरि पनि आफू सच्चिएर अघि बढ्यो भने आगामी दिनको काङ्ग्रेसको यात्रा सहज हुनेछ । यदि सच्चिन सकेन भने काङ्ग्रेस सङ्कटतर्फ फस्ने छ ।
राजनीतिक रुपमा चतुर खेलाडी विश्वप्रकाश शर्माले पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी पुरा गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।